Fizahan-tany LGBTQ + any Berlin sy Milan | LGBTQ
Home » LGBTQ » Fizahan-tany LGBTQ + any Berlin sy Milan
Fizahan-tany LGBTQ + any Berlin sy Milan
ITB 2021 dia nitazona ny drafitra fampiharana azy taorian'ny fanafoanana tampoka tamin'ny taon-dasa noho ny fandrosoan'ny COVID-19 izay misy ny fizahan-tany LGBTQ +.
Ny fizahan-tany LGBTQ + dia hisolo tena azy amin'ny endrika mpiara-miasa ofisialin'ny Italia National Board Board (ENIT) ao amin'ny ITB Berlin amin'ity taona ity.
Ny Fifanarahana IGLTA 2022 maneran-tany any Milan dia antenaina hamokatra 400 tapitrisa euro isan-taona ny vola omena.
Queer Vadis dia vavahady iray vao teraka ary natokana ho an'ny fizahan-tany iraisam-pirenena LGBTQ + any Italia.
Ny Fikambanan'ny fizahantany gay & lesbiana italianina (AITGL) dia tsy te-hanadino ny fotoana handray anjara amin'ny ITB Berlin IZAO manomboka ny 9-12 martsa 2021 ka lasa mpiara-miasa ofisialin'ny birao nasionalista fizahan-tany italiana, ENIT. Ny AITGL dia hanatevin-daharana ny ENIT amin'ny hetsika maro natokana ho an'ny fifandraisana, ny fanavaozana ary ny marketing amin'ny fizahantany LGBTQ +.
Ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny LGBTQ + Café fizahan-tany voalahatra ny 9 martsa amin'ny 12 ora teo nanatrehan'i Maria Elena Rossi, talen'ny Marketing ENIT; Antonella Rossi sy Christine Frank avy amin'ny ENIT; ary i Letizia Strambi, mpitantana ny gazety & fifandraisana an'ny AITGL, dia nanolotra ny tetikasan'ny Fikambanan'ny fizahan-tany gay sy lesbiana italianina ho hitan'ny Fifanarahana eran-tany IGLTA tamin'ny 00 tany Milan.
Ny 11 martsa manomboka amin'ny 1: 00-1: 30 hariva, Giovanna Ceccherini, Mpitantana ny Sales an'ny mpandraharaha mpizahatany Quiiky Tours, ao amin'ny LGBTQ + Fizahan-tany Ny Cafè Trade dia hampiseho ny tolotra ataon'ny mpiasan'ny fizahan-tany italiana lehibe amin'ity fizarana ity miaraka amin'ny fitsangatsanganana manokana momba ny "History History" momba ny fizotran'ny kolontsaina mifantoka amin'ny tantara LGBTQ +.
Ny 12 martsa amin'ny 3:30 hariva ao amin'ny LGBTQ + fizahan-tany Cafè Trade, Simona Laboccetta avy amin'ny ENIT sy Robert Peaslee avy amin'ny Satera & Mpanolotsaina amoron-dranomasina ho an'ny tsena iraisam-pirenena, dia hanazava ny fandraisana Italiana ny tsena iraisam-pirenena amin'ny alàlan'ny fifantohana amin'ilay "Queer vao vita" Vadis ”vavahady hisarihana ny fizahantany LGBTQ + any Italia miaraka amina tolotra ivelan'ny-boaty lamaody.
Ny vinavina amin'ny IGLTA 2022
Ny Fifanarahana iraisam-pirenena IGLTA 2022 any Milan dia antenaina hanatrehan'ireo mpandray anjara iraisam-pirenena miisa 720 manana marika fizahan-tany iraisampirenena ary hamokatra 400 tapitrisa euro isan-taona (araka ny angon-drakitra 2019) izay manome lanja lehibe indrindra any Italia.
"Ny fizahan-tany LGBTQ + dia miteraka vola 2.7 miliara euro ho an'ny karama eran'izao tontolo izao," hoy ny filohan'ny komity fampiroboroboana IGLTA 2022, Alessio Virgili, ary nanampy hoe: nahatratra ity dingana lehibe ity noho ny fanohanan'ny ENIT. ”
Ny komity siantifika AITGL
Ny fisian'ny ITB Berlin IZAO koa no fotoana voalohany hanehoan'ny Fikambananan'ny mpizahatany gay sy lesbiana italiana ny komity siantifika AITGL, izay noforonina mba hanehoana ny habetsaky ny fizahan-tany LGBTQ + notohanan'ny olo-malaza - ekipa manam-pahaizana izay manana voafidy hametraka ny fahaizan'izy ireo handray anjara amin'ny fanatanterahana ny hetsika AITGL, manomboka amin'ny hetsika hetsika, ka hatramin'ny fifehezana ny atiny, ka hatramin'ny fanombatombanana azy ireo.
Anisan'ireny i Maria Elena Rossi, talen'ny varotra sy fampiroboroboana ny ENIT, ary Alessio Virgili, filohan'ny AITGL ary tale jeneraly & mpanorina ny SPress & Beach, mpanentana an'ity hetsika ity.
Ny vavahady iraisam-pirenena Queer Vadis
Queer Vadis, Vondron-jotra Satera sy Beach, dia vavahady iray vao teraka ary natokana ho an'ny fizahan-tany iraisam-pirenena LGBTQ + any Italia. Natao ho an'ireo izay te-handeha ho any Italia ary misy lahatsoratra sy fampahalalana vaovao. Izy io dia mamaritra ny fomba hahitana an'i Italia tsy misy marika, stereotype ary klisezy. Ny lohan'ity tetik'asa ity dia i Robert Peaslee, talen'ny fitantanana ny asa iraisam-pirenena ao amin'ny biraon'ny SPress & Beach Group US.